Mwepụta akwụkwọ! Renée Pawlish: Nefilim, Jenesis nke Ọjọọ | Martech Zone
Fraịde, Machị 23, 2007 Sunday, October 4, 2015 Douglas Karr
Ruo afọ abụọ na ọkara mụ na Renée rụkọrọ ọrụ n'otu ụlọ ọrụ na-ere akwụkwọ akụkọ Newspaper Database na Denver, Colorado. Dị ka ọtụtụ ndị ọrụ nwere ọgụgụ isi, Renée nwere ebe okike mepụtara m. Enwere m obi ụtọ ma nwee obi ụtọ ịgụ ihe odide nke akwụkwọ omimi mbụ nke Renée. Ọ bụ ihe dị egwu na-agụ, ihe ọchị na enweghị atụ!
Renée dere m naanị ka m mara na ọ malitere akwụkwọ ọzọ ya, Nephilim Genesis of Evil. Nke a bụ nkọwa:
Otu ọchịchịrị ike akọwara na Jenesis gaghachịrị na obere ugwu ugwu nke Taylor Crossing. Mgbe ọ hụchara ihe ọjọọ na New York City, Rory Callahan bịara na West ịchọ azịza, wee hụ obodo nke ikike karịrị ike mmadụ na-adaba. Ugbu a, ndị Nefilim mezuru amụma dị njọ.
Nke mbu, kelere Renée! Na-esote… maka ndị niile na-agụsi gị agụụ ike ịgụ ebe ahụ, hụ na ị nwetara otu! Ruo ugbu a, nyocha ndị ahụ dị egwu na Amazon na akwụkwọ ndị ahụ na-aga ngwa ngwa! Ma mụ onwe m… M ga-eziga nke m na Renée ka m degara m ya! Ọbụna ma ọ bụrụ na ọ bụ onye ofufe nke Bronco.